“ရွှေမြန်မာ”: May 2010
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, May 28, 2010 No comments: Links to this post
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, May 27, 2010 1 comment: Links to this post
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် မင်္ဂလာဈေးတွင် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားနေ
ရန်ကုန်တိုင်း မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ်အတွင်းရှိ မင်္ဂလာဈေးတွင် ယနေ့နံနက် ၈ နာရီဝန်းကျင်ခန့်မှစ၍ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားနေ ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မင်္ဂလာဈေး၏ စတုတ္ထထပ်တွင် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မင်္ဂလာဈေး၏ ဈေးဖွင့်ချိန်မှာ နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါဈေးသည် မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီပိုင် ဈေးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါမီးလောင်မှုကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ်ဌာနအသီးသီးမှ မီးသတ်ယာဉ်များ အပါအ၀င် မီးငြိမ်းသတ်မှုကို ယခုအထိ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ် မီးငြိမ်းသတ်မှု ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယခုအချိန်ထိ မီးခိုးလုံးများ မိုးကောင်းကင်တွင် အုံမှိုင်းနေသည်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Monday, May 24, 2010 No comments: Links to this post
ဒီနေ့ မနက် ၉ နာရီဝန်းကျင်တွင် မင်္ဂလာဈေးတွင် ၀ါယာမှ ရှော့ဖြစ်ပြီး မီးလောင်သည်ဟု သတင်းကြားရသည်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, May 19, 2010 1 comment: Links to this post
ဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာ အပူချိန်က အရင်နှစ်တွေထက်အများကြီး ပိုလာတာကို သူငယ်ချင်းတို့လဲ သတိထားမိမယ်ထင်တယ်၊ ဟုတ်ပါတယ် တော်တော်သိသိသာသာ အပူချိန်ပိုလာလို့ ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာတောင် ရေအခက်အခဲ တွေ့နေရပါတယ် ဟိုတလောက အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ရောက်ခဲ့တဲ့ သခွပ်ကုန်းကျေးရွာမှာ ဆိုရင် တစ်ရွာလုံး အားထားပြီ်း သုံးနေရတဲ့ ချောင်း နဲ့ ရေကန် က နွေရာသီဆို ရေခမ်းတတ်ပေမယ့် အခုတော့ ရေကန်က ခမ်းခြောက်ပြီး ချောင်းက ခြေသလုံးကျော်ကျော်လောက်ပဲ ရေကျန်တော့ပါတယ်။ အရင်ကရှိတဲ့ ရေတွင်းကလည်း ရေသိပ်မထွက်တော့ အိမ်ခြေ ၁၀၀ ကျော်လောက်ရှိတဲ့ ကျေးရွာလေးက လူတွေအခက်အခဲ ကြုံရပါတယ်။ ကျွန်တော် ရောက်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတောင် သောက်သုံးရေ
အခက်အခဲကြောင့် ကော်ဖီရောင် ပေါက်နေတဲ့ ရေကို တစ်ရက်လောက် အကြည်ခံပြီး ကျိုချက်ပြီး သောက်တာတောင် အနံ နဲ့ အရသာ ရှိနေလို့ လက်ဖက်ခြောက်ခပ်ပြီးမှ
သောက်လို့ ရပါတယ်။ သူတို့ အတွက် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီး ရေအခက်အခဲ ကိုကူညီဖို့ သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းခဲ့ပါတယ် ရေတုံကင်တူးပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်၊ အခုစာကို ဖတ်ရတဲ့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေလဲ ရေအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ သူတွေကို ကူညီဖို့ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ငွေအားနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Technical Support ပဲဖြစ်ဖြစ် ပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီနိုင်ဖို့ ဓါတ်ပုံနဲ့ တကွ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ တစ်ယောက်အားနဲ့ မနိုင်ပေမယ့် စုပေါင်းအားနဲ့ ကူညီကြစို့ သူငယ်ချင်းတို့
စိတ်ဝင်စားရင် Gmail နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် (wunnatun11691@gmail.com) (wunnatun6691@gmail.com)
09 51 32379 ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်ပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်
ွှအများသုံး ရေကန် ရေခမ်းသွားတဲ့ ရေကန်
အိမ်ထောင်စု(Household) - +100
လူဦးရေ (population) - + 700
ရေရဲ့ အရောင် အနံ့ နဲ့ အရသာကြောင့် ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်အတွင်း ရေသောက်ဖို့ တော်တော်ကြိုးစားရပါတယ်။
ရေချိုးဖို့ဆိုတာတော့ စဉ်းတောင် မစားတဲ့ ကိစ္စပါ။ အဲဒီရေတောင် မကြာခင် ကုန်တော့မယ်
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Monday, May 17, 20102comments: Links to this post
ခိုကိုးရာမဲ့ ဂီလာန မိအိုဖအိုတွေကို ဘယ်လိုများကူညီပေးနိုင်မလဲလို့ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်
``မွေးဖွားခြင်းသည် သေခြင်းတရားဆီသို့ ဦးတည်နေသော ခရီးလမ်း၏အစ´´ ဟူသော
လူ့လောကသဘာဝတွင် အိုနာသေရေးနှင့် မလွဲမသွေရင်ဆိုင်ကြရမည်မှာ
ထိုရှောင်လွှဲမရသော အကြောင်းတရားများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြရသူများတွင်
ကုသိုလ်ကံကောင်းသူများအဖိှု့၎င်းတို့၏ ဘ၀နေ၀င်ချိန်ထိ မရောက်ခင်အကြား ဘ၀ကို
ပင်ပန်းဆင်းရဲကြီးစွာ ဖြတ်ကျော်နေရရှာသည်။ အကျိုးပေးကံကောင်းသည့်
ဘိုးဘွားများအဖို့ သား သမီး မြေး များနှင့် ပျော်ရွှင်နေချိန်တွင်
ကံအကျိုးပေးနည်းလှသည့် ဘိုးဘွားများမှာ ပြုစုစောင့်ရှောက်မည့်သူများ
လက်ခံစောင့်ရှောက်ထားရသော်လည်း ဘိုးဘွားများအပေါ် မနှစ်မြို့သဖြင့်
ငြူစူမှုမျိုးစုံ အောက်တွင် သိမ်ငယ်စွာ ခံစားနေထိုင်ကြရကာ
ဒုက္ခမျိုးစုံနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြ ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကြင်နာစွာ
စောင့်ရှောက်မည့်သူ ကင်းမဲ့နေသော ဘိုးဘွားများအတွက် မိသားစုသဖွယ်
နွေးထွေးစွာ စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်သော သီးသန့်ရိပ်သာကလေး တစ်ခု
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ခိုကိုးရာမဲ့ နေကြသော ဂီလာနဘိုးဘွားများအား
ကြင်နာစွာဖြင့် ၎င်းတို့အပေါ်တွင် နားလည်စာနာစိတ်၊ သည်းခံစိတ်ဖြင့်
ပြုစုယုယပေးမည့် နွေးထွေးသောမေတ္တာများဖြင့် ဖေးမကူညီနိုင်ကြစေရန် မ
တည်ငွေဖြင့် ``ဆည်းဆာရိပ်´´ ဂီလာနဘိုးဘွားများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး
လုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့ကြ ပါသည်။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန်အတွက်
အများပြည်သူစေတနာရှင်များ၏ အကူအညီများ လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူ ဘိုးဘွားများအား နွေးထွေးသော လက်များဖြင့်
ရည်ရွယ်ချက်။ ။ အသက်အရွယ်အိုမင်း၍ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ကာ
ခိုကိုးရာမဲ့နေသော ဘိုးဘွားများအား မိသားစုပုံစံဖြင့် ကြင်နာယုယမှုပေးရန်။
လုပ်ငန်းအစီအစဉ်။ ။ အဖွဲ့ဝင် အလှူရှင်တစ်ဦးမှ လှူဒါန်းသော
အသင်းပိုင်မြေနေရာတွင် စေတနာရှင်များ၏ အလှူငွေများဖြင့်
အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်၍ လုပ်ငန်းစတင်ရန်၊ ထိုမှတဖန် အလှူငွေတိုးတက်မှု
အပေါ်တွကင် အခြေခံ၍ မြေနှင့် အဆောက်အအုံတိုးချဲ့၍ ဆည်းဆာရိပ်
လက်ခံမည့်ဘိုးဘွား။ ။(၁) လူမျိုး၊ ဘာသာမရွေး ကျွေးမွေးထောက်ပံ့မည့်
သားသမီး၊ ဆွေမျိုးများမရှိသည့် ကျန်းမာရေးချို့တဲ့နေသော ဘိုးဘွားများ။
(၂) သား၊ သမီး၊ ဆွေမျိုးများရှိသော်လည်း ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်သည့်
အသက်ကန့်သတ်ချက်။ အသက်(၇၀)နှင့် အထက် ဘိုးဘွားများ (လိုအပ်ပါက ကျန်းမာရေး
နှင့် အခြားအချက်အလတ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ကန့်သတ်ချက်ကို
(၁) ဂီလာနဘိုးဘွားများ၏ လက်ရှိ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်
လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းကိုကြည့်၍ တစ်ဦးချင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဆရာဝန်၏
ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် စေတနာရှင်များမှ စနစ်တကျ
(၂)ဘိုးဘွားများ၏ ကျန်းမာရေးကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့မှ အခါမလပ်
ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်သကဲ့သို့ အမှုဆောင်အဖွဲ့မှလည်း နေ့စဉ်အလှည့်ကျ
သွားရောက်ကြည့်ရှု၍ လိုအပ်ချက်မှန်သမျှ ဖြည့်ဆည်းပေးရန်။ (၃)
ဘိုးဘွားများအတွက် အာဟာရပြည့်ဝ၍ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော အစားအစာများကို
စီမံကျွေးမွေးခြင်း၊ အသုံးအဆောင်၊ အ၀တ် အထည်နှင့် နေရာထိုင်ခင်း
စသည်တို့အား သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ထားရှိစေခြင်း၊ ဘိုးဘွားများ
ဘာသာဝင်အလိုက် ကိုးကွယ်ပွားများ အားထုတ်မှုကို ၄င်းတို့၏ဆန္ဒအတိုင်း ကူညီ
ဥပမာ - တရားစာအုပ်ဖတ်ပြခြင်း
- ရှုမှတ်ပွားများရန်အတွက် လမ်းပြပေးခြင်း
၀န်ထမ်းရွေးချယ်။ ။ လူမှုဝန်ထမ်းကိစ္စများကို စိတ်ပါဝင်စား၍
ဆေးပညာတတ်မြောက်သူများ၊ သက်ကြီးရွယ်အို ဘိုးဘွားများကို ချစ်မြတ်နိုး၍
ဖုန်း - ၀၉ ၉၉ ၂၈၅၄၉၊ ၂၀၅၄၅၁
ဖုန်း - ၃၈၈၁၃၂၊ ၀၉ ၅၀၄၃၉၅၉
ဖုန်း - ၀၉ ၉၀ ၄၂၄၈၈၊ ၂၉၀၉၆၄
ဖုန်း - ၀၉ ၅၀၅၉၉၈၂
ဖုန်း - ၀၉ ၅၀၅၅၀၆၀
ဖုန်း - 09 5177320, 293288
ဖုန်း - ၀၉ ၅၀၈၈၂၀၃
ဖုန်း - ၀၉ ၂၀၁၇၉၆၁
ဆည်းဆာရိပ် ဂီလာနဘိုးဘွားများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ရှင်သန်
အောင်မြင်ရေး အတွက် ပရဟိတစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြပါစို့။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Tuesday, May 11, 20102comments: Links to this post
အကြောင်းအရာက: မျှဝေခြင်း, ဆောင်းပါး
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, May 09, 20102comments: Links to this post
ဒီနေ့သည် အမေများနေ့ဖြစ်ပါသည်။ အမေများနေ့မှာ ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ ဂုဏ်ပြုမယ့် ကဗျာလေးကတော့...............
ပူလျှင်အရိပ် ပန်းဖြေသိပ်ပါ နေနားပါလှည့်....
မေ့မေတ္တာ ဒီအရိပ် ရိပ်ထီးကာခဲ့...
မိုးရွာလျှင်လည်း ၀င်ပါ နားပါ မိုးခိုပါလှည့်...
မေ့မေတ္တာ ဗိမာန်တော်ကြီး အေးမြနေခဲ့...
ထွေးပါ နွေးပါ ခြုံလွှမ်းပါလှည့်...
ရေဆာငတ်မူ ရင်ပူပြေရေး အမေပေး
နေပူ မိုးရွာ ဆောင်းတွင်းပါ
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, May 09, 2010 1 comment: Links to this post
၁. ၅. ၂၀၁၀ ရက်နေ့ မေဒေးနေ့ အလုပ်ပိတ်ရက်ဖြစ်ပေမယ့်အပြင်ထွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတော့ မနက်ပိုင်းအိမ်တက်ဖိတ်တဲ့ဆီကို အရင်ဝင်ပြီးနောက် အင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်ရဲ့ ၂ နှစ်ပြည့်
ကုသိုလ်လုပ်မယ်လို့ ဖုန်းဆက်လာတဲ့အတွက် ဘယ်မှာလှူမှာလဲ မေးတော့နာရေးကူညီမှုအသင်းမှာ လူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မြောက်ဥက္ကလာအ၀ိုင်းထိပ်က မဟာနွေမှာ လူစုမယ် အရောက်လာခဲ့ပါလို့ အသင်းက မောင်ပုရ်ှလေးက ပြောတဲ့အတွက် သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အချိန်က ၁၁ နာရီဆိုလို့ အမှီသွားတော့ လူစုံနေတာနဲ့ ခဏနေတော့ နာရေးကူညီမှုအသင်းတည်ရှိရာနေရာကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ နောက်
အလှူငွေကို လက်ခံမယ့် ဦးကျော်သူက စာရေးပြီး လက်မှတ်ကိုလည်း တစ်ခါထဲလက်ခံပါတယ်။ နောက် နာရေးကူညီမှုအပြင် သုခကုသိုလ်ဆိုတဲ့ ဆေးခန်းလည်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက် ဆေးခန်းတွေ လိုက်လံပြသပေးပါတယ်။ နောက် ထပ်မံသိရတာက မည်သူမဆို ပရဟိတအနေနဲ့ လာရောက်
ကုသိုလ်ပြုနိုင်ကြောင်း ကလေးတွေလည်း စာသင်ပေးသေးတာ တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးကလည်း ထည်ဝါစွာ တည်ရှိနေပါသေးတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ (အနိမ့်ဆုံးသော ကုသိုလ်အလုပ်မျိုးကို မြင့်မြတ်သော စိတ်ထားရှိသူတို့သာလျှင် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြသည်) တဲ့။ ဘယ်လောက်ကြည်နူးစရာ ကောင်းလိုက်သလဲ ပိုက်ဆံများရှိလို့ကတော့ စိန်စီမယ့်အစား ကျွန်မလည်း
ဒီလိုပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်ချင်မိပါတယ်။ နွေနေပူဟာ ၁၂ နာရီဆိုတဲ့အချိန်ဟာ နေလုံးခေါင်းပေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ စဉ်းစားသာ ကြည့်ပါတော့ ဘယ်လိုနေပူပြင်းပြီး ချွေးတဒီးဒီးကျနေမယ်ဆိုတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့အဖွဲ့သားတွေဟာ အပြုံးကိုယ်စီနဲ့ အေးချမ်းတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ အလှူလှူဖို့ စိတ်အားထက်သန်စွာ ရောက်ရှိသွားခဲ့တာဟာ အလွန်တရာမှ
ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်မောင်နှမ ရပ်ဝေးရပ်နီးက အလှူငွေတွေနဲ့ လှူဒါန်းခြင်းဟာ သူတို့ကိုယ်လည်း အဝေးကနေ ကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မ မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်။ နာရေးကူညီမှုရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကတော့
နာရေးကိစ္စပေါ်ပေါက်လာသဖြင့် အခက်အခဲကြုံတွေ့ရသော ကျန်ရစ်သူ မိသားစုတို့၏ အပူမီးကို တတ်အားသမျှ ကူညီငြိမ်းသတ်ပေးခဲ့သည်မှာ ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁) ရက်နေ့မှ (ခု 30 April 2010) နေ့အထိ နာရေးကူညီမှုပေါင်း (၈၇၀၇၅) ကျော်ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သဒ္ဒါတရား ထက်သန်သော စေတနာရှင်များ၏ လှူဒါန်းငွေများဖြင့် နာရေးပေါင်းများစွာကို အကူအညီပေးလိုက်ခြင်းကြောင့် ဗျဿနဘေးနှင့်
ကြုံတွေ့ရသော သောက၊ ပရိဒေ၀၊ ဒုက္ခ၊ ဒေါမနဿမီးများ လောင်မြိုက်ခံစားနေရရှာသည့် နာရေးရှင်မိသားစုများမှာ အထိုက်အလျောက် စိတ်သက်သာမှု ရရှိသွားကြပါသည်။ ယခုအခါ နာရေးစရိတ်များ ပိုမိုကြီးမြင့်လာခြင်းကြောင့် နာရေးကူညီမှု တောင်းခံလာသူ ဦးရေ များပြားလာပါသည်။ သို့ရာတွင် အသင်း၏ စေတနာရှင် အမှုဆောင်များ၊ အသင်းသူအသင်းသားများ၊ ၀န်ထမ်းများသည် မည်သည့်အခက်အခဲ၊ မည်သည့် အကြပ်အတည်းရှိပါစေ ကြိုးစား၍ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
အယူသည်းမှုများကို တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် ပပျောက်အောင် ကြိုးစားရင်း အနိမ့်ဆုံးသော ကုသိုလ်အလုပ်မျိုးကို မြင့်မြတ်သော စိတ်ထားရှိသူတို့သာလျှင် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြသည် ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်ကို လက်ကိုင်ပြုကာ အများအကျိုးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်၍ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ပါးသူ၏ ဒုက္ခကို ဝေမျှခံစားကာ သူတို့၏ တာဝန်ကို ပေါ့ပါးအောင် စေတနာ၊ ၀ါသနာ၊ အနစ်နာ၊ အကြင်နာဆိုသည့် နာလေးနာ ဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိနေကြပါသည်။ ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ လူမျိုးဘာသာမရွေး၊ နာရေးကိစ္စများ
၅။ ကရ၀ိတ်ဖောင်၊ အလူမီနီယံခေါင်း၊ မှန်ခေါင်း၊
မှန်စီရွှေချခေါင်းများနှင့် မီးသဂြိုဟ်ပြီးသည်အထိ တာဝန်ယူပေးခြင်းတို့ပဲ
အထက်ပါ လုပ်ငန်းများအတွက် ငွေကြေးတစ်စုံတရာ ပေးသွင်းရန် မလိုဘဲ အားလုံးအခမဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကွယ်လွန်သူအတွက် ကုသိုလ်ပြုသောအားဖြင့် အလှူငွေများ လှူဒါန်းလိုပါက အသင်းရုံးသို့
တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ မြင့်မတ်လှစွာသော ကောင်းမှုကြီးကို ပါဝင်လုပ်ဆောင်တော်မူကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။
နာရေးကူညီမှုအသင်းအနေဖြင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုတို့၏ သောက ပရိဒေ၀မီးများကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဖြေသိမ့်ကူညီပေးခဲ့သည်မှာ နှစ်ရှည်ကာလတစ်ခုကို ရောက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သေရေးကိစ္စကို အကူအညီပေးခဲ့ကြသကဲ့သို့ ရှင်သူအတွက်လည်း တတ်စွမ်းသမျှ ၀ိုင်းဝန်းကူညီလိုကြပါသဖြင့် (ပထမ) နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင် ဆေးကူညီမှု ကော်မတီကို တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းကာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၇) ရက်
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးနေ့မှစ၍ မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီး၊ တောင်ဥက္ကလာပ မိခင်နှင့်ကလေးဆေးရုံကြီး၊ အင်းစိန်ဆေးရုံကြီး၊ စံပြဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်း (ဂန္ဓီ) ဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း (ကြည့်မြင့်တိုင်)ဆေးရုံကြီး စသည့် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (၆) ရုံတွင်....
၁။ ချို့တဲ့နွမ်းပါး၍ အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူရန် လိုအပ်သော
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များကို ခွဲစိတ်ကုသပေးခြင်းဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်းတွင် နှစ်သက်ကယ်တင်ရသော ကုသိုလ်။
၂။ မည်သည့်ရောဂါမဆို ကျား/မ မရွေး ရုတ်တရက် ခွဲစိတ်ကုသရန် လိုအပ်သော
ချို့တဲ့နွမ်းပါးလူနာများအား ခွဲခန်းစရိတ် လှူဒါန်းရသော ကုသိုလ်။
၃။ မျက်စိဝေဒနာရှင်များအား မျက်စိခွဲစိတ်ကုသပေးခြင်းနှင့်
အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်များအပြင်၊ အရိုးအကြော၊ အရေပြား၊ ကင်ဆာ၊
သားဖွားမီးယပ် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ သမားတော်ကြီးများနှင့်
၄။ အပ်စိုက်ကုသလိုသော လူနာများအား အပ်စိုက်ဆရာများမှ
အပ်စိုက်ကုသပေးခြင်းအပြင် ECG, USG ဓာတ်မှန်ရိုက်သင့်သူ လူနာများအား
၅။ ကုသပေးသော ဆရာဝန်များ၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ရောဂါရှာဖွေ
၇။ အရေးပေါ် အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်သော လူနာများအား အောက်ဆီဂျင်ဘူး
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ မေလ (၂)ရက်နေ့ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် အချိန်မှ ယနေ့အထိ စေတနာရှင်ဆရာဝန်ကြီးများ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုများကြောင့် စမ်းသပ်ခနှင့် ဆေးဘိုးငွေ ပေးသွင်းရန်မလိုပဲ
အခမဲ့ ကုသပေးလျက်ရှိပါကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
နာရေး ကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ခံယူချက် စေတနာရှင် အသင်းသူ၊ အသင်းသားများသည် မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ ဟူသည့် ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးကို နှလုံးစိတ်ဝမ်းသွင်း၍ တာဝန်ယူ
ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြပါမည်။ ဗြဟ္မစိုရ်နှလုံးသားနှင့် ခရီးသွား၍ ပေးဆပ်နေသူများ အခမဲ့ ကူညီသည် အခကြေးငွေ ပေးရန် လုံးဝ (လုံးဝ) မလိုပါတဲ့။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, May 02, 2010 1 comment: Links to this post
ကွန်ပျူတာခေတ်မှာ ကလေးများရဲ့ ဥာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ အလွယ်တကူ စာသင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးများလည်း အပျင်းပြေ ပျော်ရွှင်ကြရတာပေါ့။ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ အများကြီးရှိတဲ့အထဲက ကောင်းမယ်ထင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲများကို ညွှန်းပေးပြောပေးတာပါနော်။ အခု KIDware (www.kidware-software.com) က ထုတ်လုပ်တဲ့ Early Learning (share ware) လေးက ကလေးများကို စိတ်ဝင်တစား စာသင်ယူကြပါလိမ့်မယ်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, May 01, 2010 1 comment: Links to this post